Dib -u -dhigis / Beddel Ballan - Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda Falls
Dib u dhig ballan
Foomkan waxaa loogu talagalay bukaanada horey u lahaa ballanta xaqiijiyay taleefan ama emayl ula dir shaqaalaheena. Haddii aad weli u baahan tahay inaad ballan samaysato, fadlan u isticmaal foomkeenna Codso ballan.
Dib u dhigista ballantaada:
Ku buuxi macluumaadka aasaasiga ah ee la codsaday hoos.
Xulo Daryeelka Haweenka or Daryeelka Ilmo soo rididda ballanta aad horey u haysatay.
Noo soo sheeg haddii aad jeceshahay inaad dib u dhigatid jadwal kale maalin kale ama isku maalin laakiin waqti ka duwan.
Waa lagaala soo xiriiri doonaa (adoo adeegsanaya habka aad doorbideyso) si aad u xaqiijiso waqtiga ballanta cusub.
Fadlan Ogsoonow: Dhammaan ballamaha jadwalka waa inuu cadeeyaa Aqoonyahan Caafimaad. Waxaan caadi ahaan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto oo ku saabsan ballanta la qorsheeyey goor hore, fadlan naga soo wac 703-532-2500.
Kadib markaad gudbiso codsigaaga jadwalka, fadlan xusuusnow inaad foomamka bukaan-socodka ku buuxi khadka tooska ah ballantaada ka hor
Su'aalo? Wac 703-532-2500 caawimaad ballantaada ama buuxinta foomkaaga.
Magaca Buuxa ee Bukaanka*
Taariikhda dhalashada bukaanka*
Habka Xiriirka la doorbidayo*
Lambarka Telefoonka Gacanta ee Bukaanka*
Cinwaanka Emailka Bukaanka*
Miyaad ku qanacsan tahay inaad kula hadasho shaqaalaheena Ingiriis?*
Luqadee ah ayaad jeceshahay inaad ku hadasho?
(Xubnaha shaqaalaheena waxay ku hadli karaan Isbaanishka, Hindiga iyo Nepali. Waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano inaad keento turjubaan qaangaar ah haddii aadan la qabsan karin luqaddaada.)
Xulo nooca ballantaada*
DARYEELKA UURKA (oo ay ku jiraan la-talinta xulashooyinka)
GYNECOLOGY (bukaanka aan uurka lahayn oo keliya)
Taariikhdee ayaa ballantaadu xilligan loo qorsheeyay?*
Ma rabtaa inaad jadwal kale u sameyso ...*
waqti kala duwan isla maalintaas?
Waxaan ubaahanahay inaan baajiyo balankeyga.
Xullo maalinta aad doorbidayso inaad jadwal u sameysato ballantaada:
DOORO MIDSHIINTA GALBEEDSubaxnimada Khamiista
Daryeelka Ilmo soo rididda
Ballankee ayaad dooneysaa inaad dib u dhigato?*
Telehealth iyo Shakhsi ahaanba
Taariikhdee ayaa ballanta Telehealth-KA HADA la qorsheeyey?*
Ma rabtaa inaad dib u dhigato ballantaada Telehealth ...*
Waxaan u baahanahay inaan joojiyo ballanta Telehealth.
Xulo maalinta aad doorbideyso ballanta Telehealth:
DOORO MIDFiidkii IsniintaFiidkii TalaadadaSubax ArbacoFiidkii ArbacadaKhamiista GalabSubax JimceSabtida Gelinka Dambe
Taariikhdee ayaa ballantaada Qof-ahaaneed WAQTIGA la qorsheeyey?*
Ma rabtaa inaad dib u dhigato ballantaada Qof-ahaaneed ...*
Waxaan u baahanahay inaan joojiyo ballanta shaqsi ahaaneed.
Nooca Daryeelka Ilmo soo rididda
DOORO MIDKiniinka ilmo iska soo ridka - Ilaa 9 UsbuucIlmo iska soo rididda Nidaamka - Toos - illaa 12 UsbuucIlmo iska soo rididda Nidaamka - Hurdo - Ilaa 15 ToddobaadIlmo soo ridid ​​- Ma hubo nooca weli.Qiimaynta dhiciskaMaareynta dhicinLa talinta Ikhtiyaariyada Uurka
Ilaa Maalin Ka Duwan
Xullo maalinta aad door bidayso inaad jadwal kale u sameysato ballantaada Qof-qof
DOORO MIDGalab Isniin ahTalaado GalabKhamiista GalabGalab JimcoSubax Hore Subax
DOORO MIDGalab Isniin ahTalaado GalabSubax Khamiis ahGalab JimcoSubax Hore Subax
Qiyaastii imisa toddobaad ayaa laga joogaa tan caadadaadii ugu dambeysay?
DOORO MID:wax ka yar 13 toddobaad13 toddobaad14 - 15 toddobaad
Waxaad ku xisaabin kartaa tan adoo adeegsanaya kuweenna Xisaabiyaha Uurka. (Wuxuu furmayaa daaqad cusub)
DOORO MIDTalaado GalabKhamiista GalabGalab JimcoSubax Hore Subax
DOORO MIDTalaado GalabGalab Jimco
DOORO MIDGalabnimada Isniinta (Daawada & Nidaamka Toos Kaliya)Talaado GalabSubaxnimada Khamiista (Toosinta Habka Kaliya)Khamiista Gelinka dambe (Daawaynta & Nidaamka Hurdada Kaliya)Galab JimcoSubax Hore Subax
Comments dheeraad ah
FADLAN AKHRISO OO AQOONSADA SOO SOCDA:*
Waxaan qirayaa in aan gudbinayo codsi ah in aan wax ka badalo balanta aan balansanaa. Kani waa ma xaqiijin in waqtigaagii ballanta hore la joojiyay ama dib loo dhigay. Xubin kamid ah shaqaalaheena ayaa kula soo xiriiri doona si aad u buuxiso una xaqiijiso dib u dhigista jadwalka